Apakah QnC Jelly Gamat bisa mengobati asam urat: Dongeng sleeping beauty bahasa Igbo
Ogologo oge gara aga e biri a eze na Queen na-ẹkenịmde oké oriri iji cheta mụrụ nwa ha Nwa nwanyị Briar Rose. Akwụkwọ ịkpọ òkù e zigara niile fairies na-agọzi adaeze ma e wezụga otu onye dị ka ọ na e chere na ọ nwuru anwu. Onye ọ bụla n'ime ha we biakute eze n'oriri na-eweta onyinye ndị pụrụ iche maka obere isi. The fairies malite inye ha onyinye. "Ọ ga-abụ mara mma," ka mbụ "." Ọ ga-abụ ihe amamihe "kwuru nke abụọ". "Ọ ga-abụ obiọma," kwuru nke atọ ". Naanị otu akụkọ na-ekpe na-enye onyinye mgbe mberede na ụlọ ahụ wee gbara ọchịchịrị. Mgbe ahụ, mgbe a oké flash nke ìhè otu akụkọ bụ onye na-ekpe, wee na-ele.
Ọ bụ oké iwe ka ọ dịghị onye kpọrọ ya n'ememe. Mgbe ahụ ọ sịrị, "Ihe dike ngọzi m oriri. Mgbe ahụ ọ sịrị," nakwa dike ngọzi m na on ya iri na isii ụbọchị ọmụmụ na ọ ga-etinye ya aka na a spinning wheel na-anwụ anwụ. " Ọzọ flash nke ìhè wee na akụkọ adịkwaghị. Mgbe ọzọ akụkọ bụ onye e steepụ-atụ. "My onyinye maka adaeze na fọduru." "My onyinye ya bụ ndụ! Mgbe spindle pricks ya mkpịsị aka ọ gaghị anwụ ma ga-adaba n'oké ụra. Nke ga-adịgide adịgide maka otu narị afọ. Naanị a nsusu ọnụ ya ezi ịhụnanya ga-eteta ya.
N'echi ya eze nyere a mkpọsa, enye iwu ka ihe niile spinning wheel na spindles-ebibi. N'ime afọ adaeze eto n'ime a ọmarịcha nwa agbọghọ. N'abalị iri na isii ụbọchị ọmụmụ na onye ọ bụla na-akwadebe maka Party. Adaeze kpebiri ịga ịgagharị ulo. "M na-eche ihe dị oké ndịda ụlọ elu," ka o kwuru, me ya ụzọ ya.
Ọ hụrụ a obere ọnụ ụzọ na a isi na ya. O chigharịkwuuru ndị isi na-uzọ meghere. Mgbe ahụ ọ hụrụ ụfọdụ akwa mgbago na malitere na-arị elu. Ka ọ dịgodị eze na Queen malitere ịchọ ndi-isi. Onye ọ bụla hụrụ ya ma ọ dịghị onye maara ebe ọ na-aga. Adaeze ruru n'elu ulo-elu, ebe ọ hụrụ ihe ọzọ ọnụ ụzọ nke di ubé oghe. Mgbe ahụ ọ nụrụ a iju ụzụ ụda, nke o anụtụbeghị. Ọ banyere n'ime ụlọ ma hụ otu agadi nwaanyị na-arụ ọrụ a spinning labeelu. "Gịnị ka ị na-eme, jụrụ Briar Rose, adaeze?" Ahụtụbeghị m otu n'ime ndị na tupu, gịnị ka ọ bụ "? "Ọ bụ a spinning wheel kwuru ochie nwanyị na-ajọ akụkọ m uru.
Ndị isi jụrụ ya ma ya ga-agbalị na-akpa ogho na wheel, na spindle ọ wee malite ihi ụra. Ozugbo onye ọ bụla nọ n'ebe na-ede, ndị osi ite, na ndinyom, na-eje ozi na onye ọ bụla ede. Adaeze e now maara dị ka ehi ụra mma. Afọ gabigara .... A nwa eze ga-abịa ma ama Brior oke chọpụta ihe-omimi nke ụra mma.
Otu ụbọchị otu maa mma isi, jụrụ ụfọdụ ndị obodo ahụ ebe pụrụ inyere ya oke? Dị nnọọ n'ofè obodo eto eto sir "ka obodo. The Prince wee tie na oke, ma mgbe ya mma agha zutere ogwu oké Roses bloomed na a ụzọ emeghere ya. The isi banye n'obí gara ahụ ụlọ elu ụlọ na hụrụ adaeze-ehi ezigbo ụra. O binyere n'elu na jiri nwayọọ susuo ya. Brior bilie, na-ehi ụra mma flickered anya ya ma ọ teta. Mgbe ọ hụrụ maa mma isi ọ dara na ịhụnanya na ya. All gburugburu n'ulo eze ndị mmadụ malitere eyedemede ha ụra. The Prince na adaeze lụrụ. The eze agbamakwụkwọ dịruru ọtụtụ ụbọchị agwụcha na a ebube bọl. The Prince na adaeze gbagidere egwú na gbagidere egwú abalị nile.